Vaovao - Fotoam-pijinjana ho an'ny tsena eropeana
In taona vitsivitsy lasa izay，HBXG dia nanamafy ny fampandrosoana ny tsena eropeana. Tao anatin'ny 20 taona lasa, isikafoana FITSIDIHANAing tsena lehibe any Eropa SY fihaonana agents mahery ny midinika ny Drafitra fiaraha-miasa maharitra. HBXG nahavita behanitsysantionan'ny ny fitaovana sy ny fampisehoanas ny ny vokatra arakaraka ny filan'ny mpanjifa eo amin'ny tsena eropeana, ary nahazo ny fitokisana tsikelikely Eoropa mpanjifa noho ny antsyle kalitao ary ny fahombiazan'ny vidinay avo lenta. Manana isika nanana ny antsika agents sy mpanjifa tsy mivadika. NY varotra nitombo hatrany isan-taona, ary HBXG nanitatra tsikelikely ny anjaran'ny tsena any Eropa.
Hatramin'ny fiparitahan'ny COVID-19 tamin'ny taona 2020, ny tsena eropeana amin'ny ankapobeny dia tratry ny ambaratonga samihafa. HBXGnamakafaka tsara ny tena toe-javatras ny tsenas, masoivoho nanampy hanamafisana ny dokambarotra tambajotra, niezaka hampivelarana loharanom-pahalalana ho an'ny mpanjifa vaovao, ary nohamafisina ny fananganana fahaizan'ny serivisy, ny rafitra fananganana rafitra sy ny fananganana rafitra faritra serivisy. Etsy ankilany, HBXG prosombin-kazod asa nomerika sy manan-tsaina hanatsarana ny efficienc asaies. SY iSIKA manatsara hatrany ny kalitao sy ny hafainganan'ny vokatra, ny famokarana, ny serivisy, mba mifanaraka tsara amin'ny filan'ny fampandrosoana ny orinasas.
Noho ny ezaka tsy manam-paharoa, ny tsena eropeana dia mitazona fitomboana maharitra mandritra ny areti-mandringana ary mijinja tsikelikely ny vokatra fotoana. Nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny septambra ny 2021, HBXG dia nitazona fandefasana entana mahazatra tsy tapakas mankany amin'ny tsena eropeanas, izay dia antenaina hanokatra tsena malalaka ho an'ny orinasa ary hitondra toerana bebe kokoa amin'ny fitomboana.
Na dia nihatsara aza ny haavon'ny famokarana sy ny fifaninanana amin'ny vokatra vokarinay eo amin'ny tsena eropeana tato anatin'ny taona vitsivitsy, HBXG mbola has banga iray avy amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny indostria. Toy ny mahazatra,HBXG hiezaka hanatsara ny haavon'ny vokatra sy serivisy, tsy tapaka hampivelarana ny orinasa fanondranana, ary ezaho ny tsena eropeana lehibe kokoa noho ny fanamafisana ireo mpanjifa voalohany.